Izoqala nini Half Life 3, futhi noma ngabe bayokhululwa?
"Half Life" - umdlalo olungaqhathaniswa kufaneleke kubhekwa edume. Wayengomunye okwangempela we ephelele lokuqala umuntu Bhalobhasha, futhi namanje ujabule ukudlala eziningi abadlali. Bona Reiter njengoba ingxenye yokuqala kanye nenhlalakahle yesibili nangemihelo elinde isikhathi lapho Valve - uchungechunge kunjiniyela - uye samemezela ukukhululwa kwencwadi inxenye yesithathu. Eyokuqala "Half Life" eyakhishwa kudala ngo-1998, kulandelwa anezele ambalwa, bese ngo-2004 kwafezeka enye inkondlo elama. C, futhi abadlali emhlabeni wonke ufuna ukwazi lapho kuthanda Life Isigamu 3 kusukela ukukhululwa walo minyaka eyishumi edlule zidlulile.
Konke kwaqala, njengoba kushiwo ngenhla, ngo-1998, lapho emashalofini, an amazing shooter game nge icebo ezijulile futhi Gameplay fun. Savunyelwa ukuzama umfanekiso usokhemisi buthule Gordon Freeman, ngubani zonke izingxenye ezimbili umdlalo akazange khuluma mbalwa zwi. Kodwa lapho imfihlo base "Black IMisa" kuphakama isimo esiphuthumayo, Gordon komzamo wathatha izikhali bagijima ukuze asindise ukuphila kwakhe, ukuthi singakwazi ukudlulisela iqiniso emhlabeni. Yena ngesikhathi esifanayo okudingeka babhekane nabo bobabili izidalwa ezisesimweni sokuguquka, okuyinto zadalwa ngesisekelo, futhi amasosha owayekade ngaphambilini ukuqeda Gordon ngakulahla nganoma iyiphi indlela.
Ingxenye yokuqala umdlalo wenza ukusaphazela ngoba "Half Life" embonini umdlalo alizibonanga Bhalobhasha elikhulu kangaka. Yiqiniso, abadlali bafuna ukubona enye inkondlo elama, kodwa kwadingeka balindele iminyaka eyisithupha. Phakathi nalesi sikhathi ngaphuma futhi "Counter Strike" (kutholakala uhlelo lokuxhumana Bhalobhasha ku injini, "Half Life"), kanye nezinye amaphrojekthi kusukela "Valvil", kodwa kuphela ngo-2004, ngabona ukukhanya ukuqhubeka Bhalobhasha akukhuthazwa. Engangicabanga ngayo nabanye kokungabaza, njengoba phambili yobuciko ngokuvamile hhayi kuze ezingeni ngaphambili yabo. Nokho, esimweni "Half Life" konke zaphumela ehluke - ingxenye yesibili kwaba nje njengoba langa njengoba kuyizinto zokuqala. Yingakho hhayi kuphela abalandeli yochungechunge, kodwa nje abadlali namanje ezibuza ngalokho nini Hald Life 3. Phela, bonke abantu ulinde lomsebenzi Abadali ukuqhuma esilandelayo emkhakheni ukuthuthukiswa umdlalo.
Okuphuma lokuqala ingxenye yesithathu "Life Isigamu" kwamenyezelwa hhayi kakhulu kudala - cishe eminyakeni emihlanu edlule. abadlali abaningi ukhohlwe kakade ukuthi "Valvil" wake wathembisa ukuthi isiqephu sesithathu nesokugcina ka nendumezulu okukhulu mayelana Gordon Freeman bayokhululwa. Kodwa nangale amagama abakutholanga - minyaka yonke kukhona imibiko bayanda sokudlulisela engxenyeni yokugcina trilogy "Half Life", kwakukhona amahlaya kwi-inthanethi ukuthi lo mdlalo ungase ngeke babone ukukhanya. Onjiniyela zemibuzo ephathelene nini ukuPhila Isigamu 3, njalo ubaphendule engacacile akazange athembisa yini ethize. Engxoxweni aba nayo yamuva nomunye Onjiniyela ukuthi inxenye yesithathu izotholakala kamuva lokhu kuwa, kodwa bambalwa kakhulu abantu babekholelwa ke. Ingabe uchungechunge izohlala sidle? Ingabe umbuzo mayelana nini ukuPhila Isigamu 3, futhi ngeke waphendula?
A ray eyethile ithemba
manje "Valvil" isebenza ukuthuthukisa injini yayo amageyimu ikhompyutha, ukuze okusobala ukuthi aziyona kuze kube amaphrojekthi angaphandle. Ngaphambi kokuqala ukusebenza ezibalulekile ezinjengalezi, inkampani usethule abacibishelayo ezimbili inthanethi esimweni salokho zombie-okuthiwa Left 4 Dead, kanye ingxenye yesibili the puzzle Portal, okuyinto wathola ahlukene olulodwa futhi co-op umkhankaso, ukwakha storylines ehluke ngokuphelele. Ngemva kwalokhu "ithoyizi" omusha enkampanini awuhambanga, kodwa kakhulu muva nje usungule iwebhusayithi ezehlukile ezingatholakala ezisikhanyisela lo mbuzo: "Nini Half Life 3?" Khishiwe imidlalo phandle lapho, yebo, aluboniswa, ngoba isayithi lihlotshiswe engaqondakali kakhulu. Ekhasini ngokomfanekiso okubonisa yonke, futhi ngaphansi kwalo kukhona izinto zokubala ezintathu, amelela i amaphrojekthi engashongo. Omunye wabo kungenzeka kungahambisani injini game, usuku ukukhululwa kwe "Valvil", omunye - platform umdlalo "Steam Ibhokisi", kodwa yini ukubala wesithathu? Abaningi bacabanga, kanti ngiyethemba ukuthi lunikezelwe "Isigamu", okungakwazi kodwa jabulani. Kuyinto ayikaziwa uma ungaphandle Half Life 3, kodwa ngisho kungekho ngokuqinisekile ukuthi lo counter inokuthile ukwenza nephrojekthi eziyihlazo, kodwa ezinye izingcweti bakwazile "uyiphathe ngesandla" ngomfanekiso ufanekisela yonke, futhi ngokushintsha Ngokuphambene, ulithole ihluzo umhleli isibonakaliso "Half Life" nenani 3. ubufakazi Nokho, kungaba neze, njengoba le vidiyo kalula kakhulu ukuba bhila.
Bekungeke kube phakade kumdlalo?
Nakuba abantu abanethemba lokuhle ku izithombe kusukela logo iwebhusayithi "Half Life", le pessimists cabangela amathuba ukuthi engxenyeni yokugcina ngeke kutholakale. Abaningi babo abangu bahlushwe umbuzo ukuthi Ukuphila Isigamu 3 bayokhululwa nhlobo, futhi izibikezelo akuzona akuve kududuza. Iqiniso lokuthi cishe wonke amaphrojekthi yamuva "Valvil" kukhona kwenethiwekhi. Basuke eyenzelwe co-op, okuyinto ephambene ngokuphelele umqondo wegama elithi "Half Life". Ngakho-ke, kungenzeka ukuthi "Valvil" izoqhubeka ukubhekana kuphela amaphrojekthi inethiwekhi, futhi ingxenye yokugcina trilogy futhi ngeke nikhululwe. Thina silinde sibone ...
Njengoba kocingo Yakhiwe ngo "Maynkraft" - imiyalelo